Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors inafuture version of PHP; Category_Post_List_widget hasadeprecated constructor in /home/bigkha5/public_html/site/wp-content/plugins/1category-post-list-widget11/category-post-list-widget.php on line 75
श्रृखंला ११८ देशका सुन्दरीमध्ये नवौं स्थानमा, मेक्सिकोकी सुन्दरीलार्इ मिस वर्ल्डको उपाधि – BIG FM 101.2 MHz
ढुंगेसाँघु मेलामा महिलाको गलाबाट सिक्री तानेर भाग्न खोज्ने दुई पक्राउ
विवेकशील साझामा गण्डकी प्रदेशबाट केन्द्रिय सदस्यमा शुशिला केसी अधिकारी
‘हतार र अप्रत्याशित किसिमले छापामार शैलीमा पार्टी विभाजन’ पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक नै पत्रकार दीर्घामा
७ महिनापछि खुल्यो सराङकोट हत्याकाण्डको रहस्य,भारतमा समातिए हत्यारा (घटना विवरण)
आहा ! हिउँ पछिको मुस्ताङ !
डेढ वर्षपछि सल्टियो मणिपालको श्रमिक विवाद, ४० प्रतिशतले बढ्यो तलब
पर्यटन प्रवर्दनका लागी रुपा मेला २०७५ आजदेखी सुरु
लमजुङमा फेरी भुकम्पको धक्का महसुस
विवेकशील साझा : जिल्लामा छैन फुटको असर
सुटिङ सेटमा हरिहर अधिकारीको गर्लफ्रेन्डले गरिन् बबाल (भिडियोसहित)
रविन्द्र मिश्रको उज्ज्वल थापाहरुलाई ‘प्रेमपत्र’ – ‘देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुटु चाहिन्छ’
विवेकशील फुटेपछि संस्थापन पक्ष – ‘आघात र धोकापूर्ण कार्यको इतिहासले मुल्यांकन गर्नेछ’
Home » मनोरञ्जन » श्रृखंला ११८ देशका सुन्दरीमध्ये नवौं स्थानमा, मेक्सिकोकी सुन्दरीलार्इ मिस वर्ल्डको उपाधि
श्रृखंला ११८ देशका सुन्दरीमध्ये नवौं स्थानमा, मेक्सिकोकी सुन्दरीलार्इ मिस वर्ल्डको उपाधि
मिस नेपाल श्रृखंला खतिवडा मिस वर्ल्ड २०१८ मा टप फाइभमा पुग्न सकिनन् । एशियामा थाइल्याण्डसँग पछि परेपछि उनको अगाडिको यात्रा रोकियो । २०१८ को मिस वर्ल्डको ताज भने मेक्सिकोकी सुन्दरी भेनेसा पोन्स डी लिअनले पहिरेकी छन्।
११८ देशका प्रतिस्पर्धी सुन्दरीमध्ये २६ वर्षीया भेनेसाले विश्व सुन्दरीको उपाधि चुम्न सफल भएकी हुन्। उनलाई गत वर्षकी भारतकी विश्व सुन्दरी मानुषी छिल्लरले ताज पहिर्‍याएकी हुन्। रनरअपको उपाधि भने मिस थाइल्याण्ड निकोलिन लिम्स्नुकान जितेकी छन्।
मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडा यो वर्षको मिस वर्ल्ड २०१८ को टप १२ चरणमा पुग्न सफल भएकी हुन्। चीनको सान्या सहरमा शनिबार सम्पन्न ६८ औं मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा २३ वर्षीय खतिवडाले नवौं स्थान ओगटेकी हुन्।
एसियाबाट छानिएका दश देशमध्य नेपाल, थाइल्याण्ड र न्युजिलेण्ड मात्र टप १२ मा जान सफल भएए। टप १२ मा परेसँगै शृङ्खलाले नेपालले गरेको सपोर्टप्रति धन्यवाद दिन भुलिनन्। ‘मलाई ट्राभलिङ र यड्भेन्चर गर्न मन पर्छ। नेपाल फर्किएर म सगरमाथा चढ्ने सोचमा छु।’
टप फाइभका लागि पाँच महादेशमा केरेमियनबाट जमैका, अमेरिकाबाट मेक्सिको, अफ्रिकाबाट युगान्डा, र एसियाबाट थाइल्याण्ड सफल भएका थिए।
मिस नेपाल शृङखला पहिलो चरणमा प्रतियोगीबाट ३० मध्ये १२ पुगेकी थिइन् । दोस्रो चरणमा १२ मध्ये पाँच छानिएकी हुन्। प्रतियोगितामा शृंखला खतिवडाले दुई विधागत अवार्ड जितेकी छिन्। सोमबार साँझ भएको घोषणामा शृंखलाले ‘मल्टिमिडिया अवार्ड’ र ‘ब्युटी विद पर्पज’ जितेकी हुन्।
मिस वल्र्डको टप ३० मा पर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिने फास्ट ट्रयाक इभेन्टअन्तर्गत उनले सातमध्ये दुई अवार्ड जितेकी हुन्। मिस वर्ल्डमा धेरै नै महत्वका साथ हेरिने ब्युटी विद पर्पजमा शृंखलाले बनाएको भिडियो २५ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै पहिलो भएको थियाे ।
विश्वभरका १ सय १८ देशका सुन्दरीले मिस वर्ल्डमा भिडियो लिएर गएका थिए। आयोजकले १ सय १८ मध्येबाट २५ भिडियो सर्टलिस्ट गरेका थिए।
यसरी छानिएका २५ मध्ये शृंखलाले बनाएको भिडियो उत्कृष्ट भएको हो। शृंखलाले मकवानपुरको चेपाङ बस्तीमा स्वास्थ्य चौकीको आवश्यकता र स्वास्थ्य चौकीले त्यो समुदायमा आएको परिवर्तनलाई भिडियोमा कैद गरेकी थिइन्। सिसन बानियाँले शृंखलालाई भिडियो निर्माणमा सघाएका थिए।
सोमबार साँझ नै मल्टिमिडिया अवार्डको पनि घोषणा भएको थियो। नेपालकी शृंखलालाई यो विधामा भने सुरुदेखि नै दाबेदार मानिँदै आएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति, फलोअरको इंगजमेन्ट, क्रिएटिभ कन्टेन्ट र प्रभाव आदिलाई ध्यानमा राखी दिइने अवार्डमा शृंखलाले बाँकी प्रतिस्पर्धीलाई निकै पछाडि छाडेकी थिइन्। शृंखलाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मोबस्टार, ट्वीटर, मोडल पावरलाइभ आदि सबै माध्यममा दमदार उपस्थिति जनाएकी थिइन्।
काठमाण्डौ, १ माघ । विवेकशील साझा पार्टीले उज्ज्वल थापा समूहले छापामार शैलीमा पार्टी फुटाएको निष्कर्ष निकालेको छ …